मार्क्स भगवान् होइनन्- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मार्क्स भगवान् होइनन्
वैशाख २२, २०७५ घनश्याम भुसाल
काठमाडौँ — दुई शताब्दीदेखि संसारभर चर्चा भइरहेको दर्शन ‘मार्क्सवाद’ का प्रणेता कार्ल मार्क्स जन्मेको शनिबार दुई सय वर्ष पुग्दै छ । मार्क्स जन्मेको दुई शताब्दी पुगेको अवसरमा मार्क्सवादी विमर्शलाई व्यापकता दिन गत वर्षदेखि नै एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा ‘कार्ल मार्क्स जन्म द्विशतवार्षिकी समारोह समिति’ बनेको छ ।
त्यसले एक वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ। मार्क्सवादको मिहिन अध्ययन गरी नेपालमा समेत त्यसको उपयोगिताबारे भुसालले ‘नेपालको अर्थराजनीति’ र आजको माक्र्सवाद र नेपाली क्रान्ति’ नामक दुई पुस्तक लेखे। मार्क्सवादका कट्टर अनुयायी भुसालले मार्क्सलाई यसरी सम्झेका छन् :
कार्ल मार्क्स जन्मेको दुई सय वर्ष पुगेको छ । सन् १८१८ मे ५ उनको एक पढालेखा परिवारमा जर्मनीमा जन्म भयो । बुवा वकिल थिए त्यसैले उनले सानैबाटै लेखपढको वातावरण पाए र दर्शनशास्त्रको विद्यार्थी भए । उनी जन्मेको कालखण्डमा युरोपको विकसित दार्शनिक पद्धति ‘हेगलवाद’ थियो । त्यसको राम्रो अध्येता भए उनी । हेगलवादमाथिको विमर्श र चिन्तन मननले उनलाई नै एउटा महान् दार्शनिकको रूपमा स्थापित गरायो । फ्रान्सेली क्रान्तिले विगुल फुकिसकेको थियो । नेपोलियन बोनापार्टले सामान्ती राजा रजौटालाई हल्लाइसकेका थिए । युरोपमा बोनापार्टले ल्याएको क्रान्तिको उथलपुथल समयमा माक्र्स आए । ब्रिटेन आर्थिक हिसाबले बलियो थियो । फ्रान्समा समाजवादको परम्परा थियो । दर्शनमा जर्मनहरूको ठूलो प्रभाव थियो । यी विषयहरूमाथि ठूलो बहस र विमर्श चलेको बेला माक्र्सको उदय भयो ।
तर, व्यक्तिगत रूपमा उनको जिन्दगी दु:खमय छ । उनले २३ वर्षमा पीएचडी गरे । त्यसपछि उनले पत्रिकामा उनले एउटा लेख लेखे ‘अ रथलेस क्रिटिसिज्म टु इभ्रिथिङ एक्जिस्टिङ’ । लेखमा उनले जेजे चीज अस्तित्वमा छन् ती सबका विरुद्ध अब हामी लड्नुपर्छ भन्ने सन्देश थियो । विशेषगरी धर्म र सत्ताका नाममा भइरहेका गतिविधिविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने घोषणा त्यसमा थियो । पत्रकारिताले उनलाई क्रमश: क्रान्तिकारी बनाउँदै लग्यो । पत्रकारितामा उनले श्रमजीवी किसानको पक्षमा लेख्न थाले । त्यसपछि उनको सत्तासँग टकराव सुरु भयो । त्यसैले २५ वर्षको उमेरमा उनी निर्वासित भए, त्यही वर्ष उनले आफूभन्दा ४ वर्ष जेठी युवतीसँग प्रेमविवाहसमेत गरेका थिए । निर्वासित भएर पेरिस गए । त्यसपछि जर्मन सरकारले फ्रान्स सरकारलाई दबाब दियो । त्यसपछि फ्रान्स छोडेर ब्रसेल्स गए । ब्रसेल्समा पनि १८४८ बाट हटाइयो । त्यसपछि उनी जर्मनीकै क्रान्तिकारी गतिविधिमा भाग लिन पुगे । त्यसपछि सरकारले निकाला गरेपछि फेरि पेरिस गए । १८४९ पछि उनी लन्डन गए । लन्डनमा पुग्दा उनी दर्शनको हिसाबले समृद्ध भइसकेका थिए । लन्डन जानुअघि घोषाणापत्र नै लेखिसकेका थिए । जर्मनीले लखेटेपछि उनले १८४५ मा जर्मन नागरिकता त्यागे । त्यसैले उनको ‘नेसनालिटी’ मा धेरैले ‘स्टेटलेस’ लेख्ने गरेका छन् । उसको राष्ट्रियता राज्यविहीन हो । लन्डनमा उनले पत्रपत्रिकामा लेखेर खानुपथ्र्याे । सात सन्तान थिए । १८६७ मा उनको ‘पुँजी’ प्रकाशित भयो । माक्र्स पत्रकार, दार्शनिक, समाजवादी, समाजशास्त्री, राजनीतिक चिन्तक हुन् ।
खासगरी आधुनिक दुनियालाई प्रभावित पार्ने विचार शृंखला माक्र्सवाद हो भन्ने माक्र्सवादइतर बौद्धिकमा पनि स्थापित छ । माक्र्सले एउटा विचार शृंखला निर्माण गरेर दुनियासमक्ष राखे । यस हिसाबले हेर्दा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति, साहित्यलगायत समाज विज्ञानका जुनसुकै क्षेत्र माक्र्सवादमा अध्ययनको एउटा अनिवार्य विषय बन्ने गरेको छ । हुन त सोभियत युनियनको पतनपछि माक्र्सवादको युग समाप्त भयो भन्नेहरू पनि छन् तर त्यस्तो होइन ।
खासगरी उनले सबैभन्दा ठूलो अध्ययन ‘मान्छे’ माथि गरे । मान्छे के हो र उसको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा उनले अघि सारेको विचार र दर्शन सबैभन्दा ठूलो हो । त्यसलाई हामी ‘ऐतिहासिक भौतिकवाद’ भन्छौं । उनी आउनुभन्दा अघिको पूर्वीय वा पश्चिमा जुनसुकै शास्त्रले ‘मान्छे’ लाई या त यान्त्रिक उपज ठान्थ्यो या अलौकिक चेनता, ईश्वर, देवताको वा उसको सिर्जना, सृष्टि ठान्थ्यो । आध्यामिक मतले मान्छेलाई ईश्वरमा ठान्थ्यो । ईश्वरले अराए खटाएको रूपमा ‘मान्छे’ को अस्तित्व रहन्छ भनिन्थ्यो ।
मार्क्सले यही मान्यतालाई बदले । मान्छेको जीवन भौतिक छ त्यसैले त्यो भौतिक जीवनको उत्पादन आफैंले गर्छ । नयाँनयाँ परिस्थिति मान्छेले नयाँनयाँ रूपमा जन्माउँदै जान्छ भन्ने उनको कुरा छ । त्यसैले मुक्ति, मोक्ष, दु:ख, सुख सबै कुरा अलौकिक होइनन् । सुख भनेको भौतिक जीवनमा जे हो त्यही हो । यसैले मोक्ष अन्यत्र होइन, मानवीय समाजमै पाउने हो । मुक्तिका लागि जे प्रयत्न गरिन्छ, ती स्वयं मान्छेले गर्ने हो । यसर्थ मान्छेको महत्त्व र क्षमतालाई सबैभन्दा राम्रो गरी आजसम्मको इतिहासमा माक्र्सले स्पापित गरेका छन् । त्यसैले उनी अहिले पनि सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने दार्शनिकको रूपमा चिनिन्छन् ।
इतिहासलाई पनि मार्क्सले थप प्रस्ट पारे । मानिसले दैनन्दिन जीवनका आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा जे प्रयास र प्रत्यन्त गर्दै आयो ती सबै प्रयत्नहरू नै समग्रमा इतिहास हो भन्ने कुरा उनले गरे । मान्छेलाई आफू बाँच्ने क्रममा जेजे आवश्यकता पर्‍यो ती आवश्यकता पूरा गर्ने जेजे कर्म गरे त्यही आधारमा भाषा, विज्ञान, प्रविधिलगायत सबै कुराहरू सृष्टि हुँदै गए । कुनै धर्म, ईश्वर वा तपस्वीले बनाएको होइन भन्ने मान्यता माक्र्सले अघि सारे ।
पुँजीवादले ठूला नयाँ कामहरू पनि गर्‍यो । जीवनमा ठूल्ठूला कायापलट पनि गर्‍यो । अर्को संसार चहार्न ग्रहहरूसमेत खोजेर हिँड्ने बनायो । तर, पुँजीवादको चरित्र स्वामित्व केन्द्रीकृत र शोषण विकेन्द्रित हुँदै जाने हो । स्वामित्व केन्द्रीकृत र शासन विकेन्द्रित हुँदा शोषणमा पर्ने करोडौं मान्छे हुन्छन् । त्यसैले स्वामित्व साँघुरिंदै जाँदा शोषण बढ्दै जान्छ भन्ने माक्र्सले इतिहासको अध्ययनमा उल्लेख गरेका छन् ।
जब एउटाले कमाउँछ र अर्कोले फल लिन्छ त्यसलाई उनले ‘अतिरिक्त मूल्य’ को सिद्धान्तमा व्याख्या गरे । प्राकृतिक चीजमा श्रम लागेपछि त्यो उत्पादन हुन्छ भन्ने सामान्य अर्थशास्त्रीले भन्दै आएका थिए । पुँजीपतिले मजदुरलाई श्रमको मूल्य दिन्छ भन्ने मान्यता पनि उनीहरूको थियो । तर, माक्र्सले त्यसको विस्तारित व्याख्या गरे । माक्र्सले श्रमको मूल्य मालिकले थोरै मात्र दिन्छ र सबै दिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाले ।
श्रमिकले उत्पादन गर्छ र पुँजीपतिले लिँदै जान्छ । उत्पादन गर्दा लागेको सबै श्रमको मूल्य दिँदैन । श्रमिकलाई नदिएको मूल्य थुपारेर पुँजीपतिहरू पुँजीपति बन्छन् भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । श्रमिक आफू उत्पादनमा संलग्न हुन्छ । राम्रो घर बंगला बनाउँछ तर आफूले प्रयोग गर्न पाउँदैन, झुपडीमा बस्छ । राम्रो गाडी बनाउँछ प्रयोग गर्न सक्दैन । राम्रो खानेकुरा उत्पादन गर्छ तर आफू खान पाउँदैन । आफैंले उत्पादन गरेका वस्तु प्रयोगबाट वञ्चित हुुन्छ । यो न्याय हो कि अन्याय हो ? यहींनिर माक्र्सले युगीन प्रश्न गरेका छन् । सारा कुरा श्रमले बनाउँछ तर श्रममाथिको स्वामित्व र उपभोगचाहिं श्रमिकको हुँदो रहेनछ । यसरी मान्छे आफैंले उत्पादन गरेरका आफ्ना उपभोग्य वस्तु प्रयोगबाट अलग्याइन्छ त्यतिखेर मान्छे बन्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले पुँजीपति वर्गले, पुँजीवादले लाखौं करोडौं मानिसहरूको श्रमको मूल्य, उनीहरूको जीवन खोसेर उनीहरूलाई मान्छे बन्न दिँदैन । अमानवीकरण गर्छ । मान्छेबाट मनुस्यत्व अलग गरिदिन्छ भन्ने धारणा उनले अघि सारेका छन् । यो समस्या अहिले पनि समाप्त भएको छैन ।
यो कुरा स्वयं एक जना मान्छेको रूपमा मार्क्सले ल्याएका हुन् । त्यसैले मान्छेको महत्त्व दर्साउने व्यक्तिको रूपमा रहेमा माक्र्सलाई एउटा व्यक्तिकै रूपमा हेर्नुपर्छ उनलाई भगवान्जस्तो मान्यौं भने गल्ती हुन्छ । तर, त्यस्ता गल्ती बेलाबेलामा आन्दोलनका क्रममा भएका छन् । माक्र्सलाई कुन युगमा कसले व्याख्या गर्‍यो त्यसको आधारमा बुझ्न खोजियो भने गलत हुन्छ । एउटा युगमा लेनिनले व्याख्या गरे । पछि माओत्से तुङले व्याख्या गरे । माक्र्सको भाष्य र पुनर्भाष्य हुँदै जाँदाखेरी बेलाबेलामा गल्ती भएका छन् । माक्र्सलाई माक्र्सकै रूपमा पढ्नेभन्दा पनि माक्र्सलाई अरू कसैको भाष्यमा पढ्ने र बुझ्ने गरिन्छ । यो गलत हो । इतिहास पठनमा माक्र्स बुझ्ने कुरामा कमजोरी छन् ।
रुसको क्रान्तिले भोका–नांगाले शासन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण स्थापित गरेको थियो । रुसी क्रान्तिको सफलतापछि पुँजीपति वर्गको किल्लामा हल्लिएको थियो । त्यसैले स्वयं लेनिनले जे गर्‍यो त्यो नै माक्र्सवाद भन्ने रूपमा बुझियो । माओत्से तुङले जे भने त्यो नै माक्र्सवादको ठानियो । माक्र्सवादलाई यसरी मात्र बुझ्नु हुँदैन ।
संसार सृष्टिदेखि अहिलेसम्म मानिसहरू मुक्तिका खातिर दौडिइरहे । धर्म, कर्मको बाटो लिए, ईश्वर खोजे । जब समाज सुरु भयो त्यसबेलादेखि नै मान्छे समस्यासँग जुध्न थाल्यो । समस्याको वास्तविक समाधान गर्न नसकेपछि अवास्तविक समाधानहरूतर्फ ल्याग्यो । त्यसअन्तर्गत सबै सभ्यताहरूले धर्मको सृष्टि गरे । तर, माक्र्सले वास्तविक समस्याको समाधान वास्तविक तरिकाले नै खोज्ने हो भन्ने व्याख्या गरे । यही नदेखिएको समाधान अन्त कहीं भेटिँदैन भनेर व्याख्या गरे । यही सन्दर्भमा, धनि र गरिब एवं ठूला र साना हुने र नहुनेबीचको समस्या सबै अवास्तविक हो भने । वास्तविक कुरा त मान्छेले जब आफूले उत्पादन गरेका चीज आफूले उपभोग गर्न पाउँदैन, अन्याय त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
त्यसैले आफ्नो जीवनका वास्तविक समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पुँजीवादको विकासको क्रममा केही जाति, वर्ग, लिंगलाई केवल उत्पादन गर्ने श्रम मात्र गर्ने र शासित मात्र हुनेजस्तो गरी व्याख्या भयो । त्यो मान्यतालाई माक्र्सले तोड्ने प्रयास गरे । जस्तो महिलाको विषयमा पुरुषसरहको ज्यालाको कुरा उठाउने पहिलो व्यक्ति माक्र्स नै हुन् ।
यदि कही शोषण दमन छ भने त्यहाँ स्वत: माक्र्स आउँछन् । अफ्रिकामा, ल्याटिन अमेरिकामा या संसारमा कहीँ पनि दमन छ भने त्यसबाट मुक्तिको बाटो माक्र्सवादले नै दिन्छ । त्यसका लागि माक्र्सवादी भनिरहनुपर्दैन स्वत: त्यो मुक्तिमा माक्र्सवाद जोडिन आइपुग्छ । कसैकसैले सोभियत मोडलको समाजवादको पतनलाई माक्र्सवाद नै सकियो भन्ने एउटा सूत्रको रूपमा बुझ्ने गर्छन् । त्यो सच्चाइ होइन ।
नेपालमा मार्क्सवादलाई सही हिसाबमा बुझ्ने सौभाग्य पुष्पलाललाई मिल्यो । २३ वर्षको उमेरमै उनले यो विचार अघि सार्ने प्रयास गरे कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर । उनले माक्र्सको घोषणापत्रलाई अुनवादसमेत गरे । त्यसपछि नेपालमा माक्र्सवादले उर्वर भूमि पाउँदै गयो । २००७ सालमा माक्र्सवादी कम्युनिस्टहरूको गनितो–मनितो थिएन । २०१५ सालमा ४ सिट जित्यो । ४६ पछि शक्ति हासिल गर्‍यो र अहिले वाम पार्टी एक ठाउँमा छौं र सरकार चलाइरहेका छौं । अब त संविधानमा समेत समाजवाद लेखिएको छ । यस हिसाबले नेपालमा माक्र्सवादी विचारले ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । माक्र्स यहाँ उपयोगी भएका छन् । राजनीतिक हिसाबले जति उपलब्धि हासिल भएका छन्, त्यसमा टेकेर समाजवाद ल्याउने कुरामा हामीले अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तुति : दुर्गा खनाल
संसारको दुई कुनामा रहेका दुई सहर गोरखा र ग्रिमा । एउटा सहरलाई चेपे नदीले उनेको छ, अर्काेलाई मुल्डेले । जसरी गोरखावासीका लागि बाढीपहिरो कुनै नौलो हैन, त्यस्तै कथा ग्रिमावासीको पनि छ ।
वैशाख २२, २०७५ सविना कार्की
काठमाडौँ — इन्स्पेक्टर सञ्जित, सब–इन्स्पेक्टर सुन्तली र हवल्दार भैरे मिलेर डन ‘काली’ लाई पछ्याउने क्रममा उनीहरू कहिले यार्चागुम्बु संकलन गर्न गएका किसानको हत्यारा खोजीमा हुन्छन् भने कहिले मृगौला बेचिएको परिवारसँग संवाद गरिरहेका हुन्छन् । कहिले चोरिएका मूर्तिको रहस्य खोजबिन त, कहिले बेचिएकी चेलीको उद्धारमा तल्लीन ।
ती डा. आर्ने ड्र्युजका पुस्तकका पात्रहरू हुन् । जर्मनको दुर्गम गाउँमा जन्मेर शल्य–चिकित्सक बनेका उनको जीवनमा नेपाल सर्वप्रिय छ । सम्पत्तिको कमी छैन, अभाव खासै छैन र सुखी परिवारको जीवन बाँचेका त छन् तर मानसपटलमा नेपालका चेपाङहरूले एक वर्षदेखि खान नपाएर भ्यागुता समातेर जीविकोपार्जन गर्नुपरेको यथार्थ सलबलाइरहेछ ।
‘सन् १९९४ तिर डा.सरोज धितालले चितवनको विकट क्षेत्रमा चेपाङहरूका लागि स्वास्थ्य शिविर स्थापना गर्ने भए । मलाई त जसरी नि जानु थियो । यो अवसरले मेरो आँखा खोलिदियो । चेपाङहरूले ८/९ महिनादेखि खानै पाएका थिएनन् । जंगलका जरापात र भ्यागुताहरू खाएर बसेका थिए । मैले तत्कालै सोचें, अब त केही गर्नैपर्छ,’आफ्नो पुस्तक विमोचन क्रममा नेपाल आएका उनले सुनाए ।
‘तत्पश्चात् थाहा भयो, हामी जर्मनहरू त धेरै सुविधामा रहेछौं । हामीले पाउने अवसरको थोरै मात्र पनि यता दिन सके धेरैको कल्याण हुनेछ । यहाँ त ती अबोध नानीबाबुले पढ्न पनि पाएका छैनन् । मैले सोचें, केही गर्नैपर्छ । शब्दमा मात्र हैन, काममा पनि । मेरा साथीहरूको जमात बनाउनुपर्छ र यताका कुराहरू सुनाउनुपर्छ । सहयोगी हातहरू जुट्नेछन् र हामीले नेपाल मेड भन्ने संस्था गठन ग‍र्‍यौं । अब त संस्था खोलेको पनि १८ वर्ष पो भैसकेछ,’ पत्रकारहरूमाझ मन्द मुस्कान छर्दै उनी ती दिन सम्झँदै थिए ।
डा. आर्ने ड्र्युज आफ्नो नेपालसँगको नाता पनि खोल्दै थिए— अग्ला हिमाल र पहाडहरू हेर्न आएको थिएँ । तर, हिमालभन्दा अझ धेरै विषयहरू रहेछन् जसले मलाई बारम्बार यता आउन आतुर गराउँछ । यी मन्दिर, गुम्बाहरू अनि सांस्कृतिक सुन्दरता त छँदै छन्, अझ गजब लाग्छ यहाँका मनिसका अनुहारमा देखिने सदावहार मुस्कान हो ।
एक जना नेपाललाई माया गर्ने विदेशी नवयुवकको मनमा जागेको उत्साहबाट सुरु भएको यो पहलले गर्दा अहिले गोरखास्थित आँपपीपल अस्पताललाई निरन्तर सहयोग जारी छ । वार्षिक सरदर २ लाख युरो जर्मन नागरिकबाट सहयोग संकलन गर्छ र नेपालको स्वास्थसेवामा खर्च गर्छ । ‘नेपमेड’ को सहयोग अहिले त गोरखा अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल, अन्नपूर्ण न्युरोलोजिकल हस्पिटल र मनमोहन अस्पतालसम्म फैलिएको छ । संख्यामा सानै देखिए पनि दीर्घकालीन प्रभाव भने मनग्गे पर्ने देखिन्छ ।
नेपालका लागि सहयोग जुटाउने डाक्टरको शैली भने फरक छ । ‘हामी बेलायत र अन्य युरोपेली मुलुकमा डाक्टरी पढिरहेका विद्यार्थीलाई नेपालमा कुनै स्वयंसेवी कामका लागि बोलाउँछौं । उनीहरूलाई नेपालको मनोरम झलकले रोमाञ्चक बनाउँछ । यसरी उनीहरू एकातर्फ समाजसेवामा सरिक हुन्छन्, अर्कातर्फ ती भविष्यका होनहार डाक्टरको विश्व समुदायलाई हेर्ने नजरमा फरक पर्छ । जब कसैले जीवनको यथार्थ आफ्नै आँखाले देख्दैन, तबसम्म विषयको गहनताको अनुमान लगाउनै सक्दैन । यसरी ती डाक्टरहरू अझ ठूलो मन लिएर आफ्नो देश फर्कन्छन् । यसले उनीहरूको जीवनशैली नै परिवर्तन गर्न निकै सहयोग गरिदिन्छ । वास्तवमा ती अझ असल र चिकित्सक बन्न सहयोग पुग्छ । सायद यसले उनीहरूलाई चिकित्सा सेवाको धरातल र भिन्नतासम्बन्धी प्रत्यक्ष ज्ञान दिएको छ । फर्केर उनीहरू एक रिपोर्ट बनाउँछन् र प्राय:ले आफ्नो विश्वलाई हेर्ने दृष्‍िट बदलिएको पाएका छन् । यो नै हाम्रो सफलता हो । ती फर्किन्छन् र हाम्राबारेमा कुरा गर्छन् । यताको आवश्यकताबारेमा चर्चा गर्छन् जसले हामीलाई नेपालका गाउँघरमा चलिरहेका परियोजनालाई चुस्त र फलदायी बनाउन अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ ।
गौरवका साथ सुरुआती दिनका बारेमा डा. भन्दै जान्छन्— हामीले आफ्नै पहलमा २ हजार युरोमा सुरु गरेका थियौं र अहिले वार्षिक २ लाख युरो (२ करोड रुपैयाँ) हाराहारी उठेको छ । यसबाट नेपालमा कार्यरत डाक्टरहरूलाई नयाँ प्रविधिहरू उपलब्ध गराउन सकेका छौं । हामी दुर्गमका हेल्थपोस्टमा पनि जान्छौं । गोरखाको आँपपीपल अस्पतालसँग त साथै काम गरिरहेकै छौं । धेरै अस्पतालसँग हामी नजिकिन पाएका छौं तर आँपपीपलसँगको हाम्रो सम्बन्धको कथा आफ्नै छ ।
कुनै बेला विविध कारणले त्यस अस्पतालमा डाक्टरहरूले काम छोडे, दाताहरूले पनि हात झिके तर एक जर्मन डाक्टर स्टार्क ९ वर्षसम्म एकल सेवा गरिरहे— त्यो पनि नि:शुल्क । वास्तवमा उनी चौबीसै घण्टा सेवामा हाजिर हुन तयार हुन्थे । यसरी अस्पतालले पुनर्जीवन पाउन उनको पनि योगदान रह्यो । सो योगदानको निरन्तरता हामीले दिएका छौं ।
पालुङटार नगरपालिका, चेपे नदीको आडमा अवस्थित आँपपीपल अस्पतालमा हाल ४६ शय्या छन् । दैनिक ५५ देखि ११० बिरामीको आवतजावत हुने आँपपीपल गोरखाका दुई अस्पातालमध्ये एक हो । आधुनिक डिजिटल एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड र अत्याधुनिक प्रयोगशालाले सुसज्जित यस सरकारी अस्पतालको सञ्चालन समितिमा स्थानीयकै सक्रियता हुने गरेको छ । हामी नेपालीकै नेतृत्वमा काम गर्छौं ।
यो अस्पताल बारपाक नजिकै छ । विनाशकारी भूकम्पले वरपर ठूलै क्षति गर्दासमेत यस अस्पतालले सेवा सुचारु राखिरह्यो । पहिलो पटक गोरखा जाँदा मनसुनको मौसम थियो । जर्मनीतिर मनसुन खासै हुँदैन । यताको त मौसम नै रोमाञ्चक । गोडेटो, घोडेटो, बाटा, अग्ला पहाड, भरियाहरू । एक प्रकारको अद्भुत अनुभव थियो भने अर्कातर्फ मलाई ती जटिल जीवनको यथार्थले छटपटाहट हुन्थ्यो ।
आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म नेपालका अत्यत्न विपन्न वर्गसम्म स्वास्थ्य सेवा पु‍र्‍याउने उनको सपना छ । सोलुखुम्बुको फेरास्थित स्वास्थ्य चौकीलाई स्वावलम्बी बनाउने उनको होस्टेमा नेपालमेडका सहकर्मीहरूले हैंसे गरेका छन् । अब अर्काे वर्षमा त्यो सपना साकार हुने उनले देखेका छन् । त्यस्तै ओखलढुंगाको जन्तरखानी मैदाने र सिन्धुपाल्चोक सिपाघाटका स्वास्थ्य चौकीलाई पनि उनको अगुवाइमा अत्यावश्यक सरसामान जुटाउन सहयोग गरिएको छ ।
गोरखा हेरिटेज ट्रेक परियोजना पनि नेपालमेडको अगुवाइमा सञ्चालनमा आएको छ । यसको मूल अभिप्राय स्वास्थ्य सहयोगको रकम संकलन भए पनि गोरखा र सेरोफेरोका सांस्कृतिक विशेषता, भौगोलिक आकर्षण अनि गुरुङ समुदायको उच्च आतिथ्यको सम्मिश्रणले एकातर्फ पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ भने अर्कातर्फ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीका अवसर उब्जिएका छन् । यात्रामा निस्कनेहरूले आँपपीपल अस्पतालको भ्रमण पनि गर्ने गरेका छन् ।
तर, उनले केही गुनासा पोख्दै भने, ‘हेर्दाखेरी काठमाडौंमा सबै कुरा छ तर भित्री अवस्था भने अर्कै छ । यहाँ जसले २० युरो मासिक कमाउँदैन, उसले ६८ युरो बराबरको शल्यक्रियाको खर्च बेहोर्नुपरेको छ । खर्च कसरी जुटाउँछ ? सरकारको स्वास्थ बिमाले समस्त जनतालाई समेट्न सके यसमा ठूलो राहत हुने थियो ।’
अनुमतिबिनै नेपालका अस्पतालमा कार्यरत केही विदेशी चिकित्सकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयुक्त प्रयासमा कारबाही गरिएपछि इमानदारले पनि इजाजतका लागि समस्या झेल्नुपरेको उनको अनुभव छ ।
‘विदेशबाट आएका पोख्त र अनुभवी चिकित्सकले आफ्नो सीप सिकाउने कुरामा नेपाल सरकारको भर्खरैको नीतिले अलि बाधा गरेको रहेछ । विशेषत: चिकित्सक दर्ता प्रक्रिया अलिक झमेलायुक्त रहेछ । हामी कहिल्यै हतोत्साहित भने हुँदैनौं किनकि हरेक नीतिका आफ्नै विशेषता हुन्छन् । जर्मनीमा पनि यस्ता धेरै समस्या हुन्छन् तर जबसम्म हाम्रो नियत सफा रहन्छ समस्याहरू पनि समाधान हुँदै जान्छन्,’ डा. आर्ने ड्र्युज ढुक्कै छन् ।
आँपपीपल सानै स्तरको भए पनि अब एक आधुनिक अस्पताल बनिसकेको उनले ठहर गरेका छन् । पहिले सडक नभएको, लिगलिग दौडको कथाजस्तै अस्पतालसम्म पुग्न ढुंगेबाटाहरू पार गर्नुपर्ने र डोकोमा बिरामी सार्नुुपर्ने अवस्थाबाट अहिले धेरै उन्नति भैसकेको उनको ठहर छ ।
स्थानीयवासीहरूसँगको एक दशक पुरानो आफनो स्मृतिलाई ताजा गराउँदै डाक्टर भन्दै थिए, ‘सन् २००५ तिर सुरुआतमा दुई किलोमिटर सडक निर्माणमा हामीले पहल गर्‍यौं । अनि सरकारले पूरै पक्की सडक निर्माण गरिदियो । अब त २४ सिटे बस पनि सञ्चालनमा आएको छ । यसले पालुङटारका बिरामीसम्म हाम्रो सेवा फैलिन सकेको छ ।’
जर्मनीवासी धेरैको यसमा साथ रहेको यथार्थ पोख्दै डा. ड्र्युज भन्छन्, ‘मेरा जर्मन मित्र हाइनको डिजाइनमा अहिले फोहोर व्यवस्थापन प्रविधि पनि सुरु गरिएको छ । जर्मनीका लागि नेपालका अवैतनिक वाणिज्य दूत रामप्रताप थापा हाम्रो संस्थामा आधिकारिक रूपमै आबद्ध हुनुहुन्छ । हाम्रो काम सहज बनाउन सधैं तल्लीन हुनुहुन्छ ।’
डाक्टर नेपालप्रतिको अथाह मोह पोख्दै अगाडि भन्छन्, ‘जर्मनीमा मेरो हरेक बिहानी नेपालबाट आएका इमेलबाटै सुरु हुन्छ, लन्च पनि त्यसरी नै बित्छ र सुत्नुअगाडि पनि तीनै इमेलको प्रत्युत्तरमा बित्छ । कि त क्लिनिक कि त नेपाल । मेरो जीवन यस्तै छ । क्लिनिक प्रतीक्षालयमा नेपाली अस्पतालका बारेमा स्लाइड राखिएका छन् जुन देखेर कैयौंले सेवाका हात फैलाउने गरेका छन् ।’
उनी भन्छन्, ‘एक दिन मेरै क्लिनिकमा उपचार गर्न आएकी एक प्रौढले सोधिन्, ती बाहिरका तस्बिर कताका हुन् ?’ मैले उत्तर दिएँ, ‘नेपाल ।’
उनले भनिन्, ‘म पनि सहयोग गर्छु ।’ यसरी थोपाथोपा बटुलिएर नदी बनेको हो ।
संसारको दुई कुनामा रहेका दुई सहर गोरखा र ग्रिमा । एउटा सहरलाई चेपे नदीले उनेको छ, अर्काेलाई ‘मुल्डे’ ले । जसरी गोरखावासीका लागि बाढीपहिरो कुनै नौलो हैन, त्यस्तै कथा ग्रिमावासीको पनि छ । बेलाबखत आफ्नो विशाल प्राकृतिक शक्तिको परीक्षण गर्छिन्, मूल्डे पनि ।
चाहे जेजस्तो होस्, जर्मनीको व्यस्त सहर ‘लिपजिग’ को २५ किलोमिटर दक्षिण–पूर्वको सानो गाउँ ग्रिमाबाट नेपाललाई अनन्य माया गर्ने चिकित्सकको एक समूह भने हरबखत नेपालकै बारे सोचिरहेको हुन्छ।